လမ်းဘေးမှ ကြောင်လေကြောင်လွင့်များ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » လမ်းဘေးမှ ကြောင်လေကြောင်လွင့်များ …
လမ်းဘေးမှ ကြောင်လေကြောင်လွင့်များ …
Posted by weiwei on Nov 21, 2010 in My Dear Diary | 19 comments
အခုတလော ထူးခြားတာလေးတွေမြင်ရင် ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်တဲ့ စေတနာအလျှောက် လမ်းဘေးမှ ကြောင်ကလေးတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ပြလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မက တရုတ်နိုင်ငံနေရာတော်တော်များများကို လျှောက်သွားဖူးတော့ ကြောင်လေကြောင်လွင့်တွေအကြောင်း သတိထားမိတာကြာလှပါပြီ။ အခုတော့ တိုက်ဆိုင်တာနဲ့ ဈေးအသွားလမ်းမမှာတွေ့တယ့် ကြောင်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြလိုက်တယ်။ တရုတ်ပြည်က လူနေရပ်ကွက်တွေမှာ သစ်ပင်တွေကို အ၀ိုင်းကြီးတွေညှပ်ထားတဲ့ အပင်အလှတွေ အများကြီးရှိတယ် .. အဲဒီလို အပင်တွေရဲ့အတွင်းပိုင်းတွေမှာ ကြောင်တွေက နေကြတယ် .. ကလေးလဲ အဲဒီမှာပဲမွေးတယ် … တရုတ်မတွေက တိုက်ပေါ်က အမှိုက်ဆင်းပစ်တဲ့အခါ စားကျွင်းစားကျန်တွေကို အဲဒီကြောင်တွေကို သေသေချာချာချကျွေးပါတယ် … ကြောင်ကလေးတွေက ၀၀ဖြိုးဖြိုးပါပဲ … ရာသီဥတုအေးတော့ အမွှေးတွေလဲ ထူထပ်နေတယ် … လူတွေကိုကြောက်တဲ့ ခပ်ရိုင်းရိုင်းကြောင်လေးတွေပါ …
ခွေးတွေကိုကျတော့ တယုတယနဲ့ သေသေချာချာမွေးကြတယ် … အဲဒီကြောင်ကလေးတွေကို မြင်မိတိုင်း သနားမိတယ် … တစ်ချို့စားသောက်ဆိုင်တွေမှာတော့ ကြောင်မွေးထားထာမြင်ဖူးတယ် .. ဒါပေမယ့် ကြောင်ကို လည်ပတ်နဲ့ တိုင်မှာအမြဲချည်ထားတာကလဲ အံ့သြစရာပါ ..
ကြောင်ဖြစ်တာတောင်မှ တရုတ်ပြည်မှာကြောင်ဖြစ်ရတာ မသက်သာပါကြောင်း ….
ကြောင်ဝတုတ်ကြီး.. အခုမှဘဲ ကြောင်ကြီး ပုံ သေချာ မြင်ဘူးတော့တယ်။ နှုတ်ခမ်းမွေးနဲ့ စိုက်ကြည့်နေတယ်။
အခုလိုဆိုတော့… တရုတ်တွေ ကြောင်သားသိပ်မစားဖူးပေါ့နော..။
ကြောင်မျိုးမှာ Burmese (cat)ကနာမယ်ကြီးပုံရတယ်..။
အခုကြောင်တွေကြည့်တော့လည်း .. မြန်မာပြည်ကကြောင်တွေနဲ့တူသား..။
ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့ တရုတ်နဲ့ဗမာကွာသလိုကွာတယ် … ရုပ်ရည်ရူပကာမတိမ်းမယိမ်းပေမယ့် တရုတ်ကြောင်က ပိုဝတယ် … ဗမာကြောင်က အကောင်သေးတယ် …
ဗမာကြောင်က အိမ်မှာ အချစ်တော် အနေနဲ့ မွေးထားတာတောင် ဒီပိုစ်က ရုပ်ရည်လိုမျိုး မျက်နှာ ၀ိုင်းဝိုင်း မဖြစ်ဘူး.. အမြင်ကို အမြင်အတိုင်းပြောရရင် ဒီကြောင်က ၀တုတ်ပြီး မျက်နှာ ပြဲကွဲနေတာဘဲ.. ချစ်ချာကြီး။ ဗမာပြည်က ကြောင်က ကြွက်ခုပ်လို့ ကိုယ်ရည်စစ်ပုံရတယ်
ဟုတ်တယ်ဗျ တရုတ်ပြည်မှာကြောင်လေကြောင်လွင့်ဘဲရှိတယ် ခွေးလေခွေးလွင့်မရှိဘူး kai ပြောတာဟုတ်တယ်တရုတ်တွေကကြောင်သားမစာကြဘူး အိမ်မှာခွေးကိုကြိုးနဲ့ချည်မွေးပြီးကြီးလါတော့သတ်စားကြတယ်။။
တရုတ်တွေ အစား ဒီလောက် သောင်းကျန်းတာ.. ကြောင်သား မစားတာ အကြောင်း တခုခုတော့ ရှိနိုင်တယ်။ ဗမာပြည်မှာတောင် ကြောင်သားစားကြတယ်။ အနံညှီလို့များလား မသိဘူး။
အနော်တို့ နိုင်ငံမှာလို ကြွက်မပေါလို့ကြောင်တန်ဖိုး နားမလည်တာနေမှာပေါ့ဂျ
တရုတ်ပြည်မော်စီတုန်းခေတ်က တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးဗျူဟာတွေထဲမှာ ခွေးလေခွေးလွင့် ပပျောက်ရေးတဲ့။
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိသမျှခွေးတွေ သတ်သတ်စားလိုက်ကြတာ ….
အဲဒီနောက် သေသွားတဲ့ခွေးတွေကခွေးလှလှလေးတွေအဖြစ်ပြန်ဝင်စားပြီး သင်းတို့ကို ပြန် လုပ်ကျွေးခိုင်းကြတာတဲ့။
သူတို့ခမြာသားသမီး(ကလေး)လဲ တစ်ယောက်အပြင် မမွေးရဘူးဆိုတော့
ကဲ… တရုတ်မှာ တိုးတက်တယ်ဆိုပြီး လူဖြစ်ချင်ကြသေးလား။
တစ်ခါတစ်လေ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ဒီလို တိုက်ဆိုင်မှု့ လိုလို ဘာတွေကလည်းခပ်များများဗျ
ကျွန်တော်ကြားဘူးတာကတော့ ကြောင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဝဋ်လိုက်မြန်တယ်ပြောကြတာဘဲ
ဗမာပြည်မှာကတော့ အပီဝါးတဲ့လူတွေ တစ်ကယ်ရှိတယ်
ကြောင်လေကြောင်လွင့်လို့ လက်လွတ်စပယ်မသုံးပါနဲ့ဗျာ။ လွတ်လပ်စွာနေလိုတဲ့ သခင်စိတ်နဲ့ လမ်းပျော်ကြောင်တွေပါ။
ယူအက်စ်မှာလည်း အိမ်ထဲပိတ်လှောင်ထားတဲ့ ကြောင်များစွာရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြို့ပြဒေသတွေမှာပါ။ နယ်တွေမှာတော့ လုံးချင်းအိမ်တွေနဲ့မိုလို့ အပြင်ထွက်ကြပုံပေါ်ပါတယ်။ ဟိုးတလောက နယ်မြို့တမြို့ မြို့ကောင်စီက ကြောင်တွေစည်းကမ်းမရှိ လမ်းသလားကြ၊ သူများခြံတွေထဲ ကျူးကျော်ဝင်ကြလို့ သူတို့ကိုလည်း ခွေးတွေလို လည်ပတ်ထားရမယ်ပြောလို့ သတင်းဖြစ်လိုက်သေးတယ်။
ကိုကြီးကြောင်လဲ ယူအက်စ်မှာ အနေကြာပြီး ဗမာစကားတွေလဲ မေ့ကုန်ပြီထင်တယ် …
ကျွန်တော်က စားတဲ့အချိန်မှာ ကြောင်အသားကိုစားတယ်လို့နှလုံးမသွင်းဘူးဗျ
မြူးထူးခြင်းငှာ မာန်ရစ်ခြင်းငှာ တန်စာဆင်ခြင်းငှာ အရေအဆင်း ဖွံ့ ဖြိုးတိုးပွားခြင်းငှာ မဟုတ်
ဤကိုယ်၏ ဆာလောင်ခြင်းနှင့် ပင်ပန်းခြင်းကို ပယ်ပျောက်စေခြင်းငှာ အဲ့ဂလို စားတာဗျ
နောက်ပြီး သတ္တဝါဆိုတာက ကိုယ်ချွတ်မှကျွတ်တာလေ
ကြောင်သားက ထန်းရည်နဲ့ ဆို ချိုးဘူး
ကိုပုရယ် ကြောင်သားကဆေးခြောက်နဲ့ဆို ခင်ဗျား နတ်သုဒ္ဒါနဲ့တောင် မလဲနိုင်ဘူး မဟုတ်လား။ ခင်ဗျားစားလွန်းလို့ ရွာနီးချုပ်စပ်ဝန်းကျင် ကြောင်မျိုးတုံးရတယ်လို့ အသိဆရာဝန်တဦးက ပြောတယ်။
ကြောင်သည် ညောင်ဟူ၍အော်၏ အစာဝလွန်းလျှင်ကြွက်မခုတ် အိုလျှင်ကြွက်မလေး
အိပ်ယာထဲ ရှုရှုးပါ အီအီပါလုပ်တတ်၏
အသားသည် ချို၏ ပူ၏ ဆပ်၏
တရုတ်တွေက ကြောင်တွေတောင် ကြောင်ပါးဝနေတာ… လူတွေဆိုရင်…
ကြူရတနာ မောင်မြကြိုင် ရဲ့ ကြောင်တစ်ရာဗိုလ် ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုလေးသွားသတိရမိတယ်။
ကြောင်ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံနဲ့ ကြောင်သားစားတဲ့သူတွေ အကြောင်း။
ဟိုတစ်လောက သူ့ဝတ္ထုကို ဗီဒီယိုခိုးရိုက်ထားပုံရတယ်။ စာရေးဆရာကလည်း သေရှာပြီဆိုတော့ ခိုးကြတာပေါ့လေ။
မဝေ အပမ်းမကြီးဘူးဆိုရင် အဲဒီလမ်းဘေးကကြောင်လေကြောင်လွင့် (လွတ်လပ်စွာနေလိုတဲ့ သခင်စိတ်နဲ့ လမ်းပျော်ကြောင်)တွေကို အဘပုအတွက်အိတ်စပို့ ပို့ပေးလိုက်စမ်းပါဗျာ